Riedel Communication CCW Expo 2014 ကုန်ပစ္စည်းကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း - NAB Show Broadcast Beat မှသတင်းများ၊ NAB ပြပွဲ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သူ - NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Riedel ဆက်သွယ်ရေး CCW ကုန်စည်ပြပွဲ 2014 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
Riedel ဆက်သွယ်ရေး CCW ကုန်စည်ပြပွဲ 2014 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
အလည်အပတ် Riedel ဆက်သွယ်ရေး အဆိုပါ CCW ကုန်စည်ပြပွဲ 2014 မှာရပ် 1241
CCW ကုန်စည်ပြပွဲ 2014 မှာ Riedel ထုတ်ကုန်:
STX-200 Professional ကထုတ်လွှင့်-အဆင့် Interface
အဆိုပါ STX-200 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်တန်း interface တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမည်သည့် Skype ကို (R) အသုံးပြုသူတတ်၏။ Microsoft က (R) ကလိုင်စင်သစ် Riedel ထုတ်ကုန်တိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်သို့သတင်းထောက်များကိုနှင့်ကြည့်ရှုနှစ်ဦးစလုံးထံမှတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုများကိုရောက်စေဖို့သူတို့အဖွကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော Single-box ကိုဖြေရှင်းချက်များအတွက်ထုတ်လွှင့် '' တိုးမြှင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ - ထိုသို့သောစားသုံးသူ PC များဘုံပြေးအဖြစ်ပုံမှန်ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားအားလုံးအနေဖြင့် Skype ကို client များ, စကင်ဖတ် HDMIစီစဉျ-SDI converters အဖြစ်, သို့မဟုတ်အသံထွက်နှင့်တိုက်ရိုက် feed ကိုအပေါ် menu ကို Pop-ups ။ တစ်ဦး stand-alone ဖြေရှင်းချက်ထက်ပိုအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်း, Riedel ရဲ့ STX-200 ပို. ပင်အစွမ်းထက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် applications များနှင့် Workflows enable လုပ်ဖို့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်သို့ Skype ကိုပေါင်းစပ်။ အဆိုပါယူနစ်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကမ်းလှမ်း HD-SDI နှင့်မျှမျှတတ XLR အသံငါ / Os နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Microsoft က Skype ကို TX ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ထုပ်ပိုးထားသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ရဲ့ကျယ်ပြန့်အင်္ဂါရပ် set ကို Skype ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ဝေးလံခေါင်သီစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပါဝင်သည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-STX-200_front.jpg
AES200 နှင့် AVB အပေါ်အခြေခံပြီးတန်ဂို TNG-67 အပြည့်အဝ networks ပလက်ဖောင်း
အဆိုပါတန်ဂို TNG-200 အဆိုပါ AES67 နှင့် AVB စံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. Riedel ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝကွန်ယက်ပလက်ဖောင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ကပ်အပ်နှံအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး application ကိုနှင့်တကွ, ပလက်ဖောင်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဖြေရှင်းချက်သို့လှည့်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါယူနစ်သူ့ဟာသူခပ်သိမ်းသောကာလစုံလင်သောဖတ်နိုင်တဲ့သေချာတဲ့ high-resolution full-အရောင် TFT display ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အလိုလို Front-panel ကိုထိန်းချုပ်မှုရလာဒ်ကဒိနှင့်အသံအဆင့်ဆင့်၏ညှိနှိုင်းမှု၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရိုးရှင်း။ အစွမ်းထက်အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူတန်ဂို TNG-200 နှစ်ခုပေါင်းစပ် Riedel ဒစ်ဂျစ်တယ် partylines နှစ်ခု AES67- နှင့် AVB-သဟဇာတဆိပ်ကမ်းများ, နှစ် Ethernet port များ, တဦးတည်း option ကို slot ကများနှင့်မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ TNG-200 လျှောက်လွှာ 40 နှင့်အတူစတင် matrix ကိုအရွယ်အစားဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပါအဝင်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျကွောငျးတခုအကျိုးရှိစွာအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်, သို့ပလက်ဖောင်းပြောင်းလဲ 80 x ။ က Riedel ပြားတစ်ဦးစံပရီမီယံအရည်အသွေးစတီရီယိုအသံချိတ်ဆက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုအတိုင်းအချိုးမညီ 40 x ကို 80 matrix ကိုအရွယ်အစား, အခြား Riedel ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-Tango-Front.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Tango TNG-200
အသစ် RSP-2318 Smartpanel အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကြွယ်ဝစေခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်ပညာရှင်များဆက်သွယ်ဖို့လမ်းကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဟု features တွေနဲ့စွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။ အစွမ်းထက်ဘက်စုံသုံး user interface ကိုအဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး smartpanel, အ Riedel device ကိုသုံး high-resolution, နေရောင်ခြည်-ဖတ်လို့ရအောင်, multitouch အရောင်ပြသမှုပါဝင်သောထူးခြားတဲ့ feature ကို set ကိုဝါကြွားတတ်; ပရီမီယံအရည်အသွေးစတီရီယိုအသံ; တစ်ဘာသာမျိုးစုံတဲ့ character set; ရုံ 18 ru အတွက် 1 သော့။ ဤအင်္ဂါရပ် Riedel ရဲ့အသစ် smartpanel နောက်ထပ် app များကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ချဲ့ထွင်နိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့ user interface ကိုလုပ်ရမည်။ အဆိုပါ RSP-2318 များအတွက် Riedel ရဲ့ပထမဦးဆုံး app ကိုတစ်ခုဆန်းသစ်နှင့်စမတ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး panel ကိုစ smartpanel ပြန်သွားလေ၏။ AES67 နှင့် AVB ဆက်သွယ်မှု / CAT ကျော် AES3 အတူစံများမှာဟများထံသွားရောက်ကာ optional ကို။ အပိုဆောင်း features တွေ Mono သို့မဟုတ်စတီရီယို applications များလဲလှယ်နားကြပ် connectors တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံ power supply, တစ်ဦးချင်းစီသော့တစ်ဦးချင်းစီအသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုက USB port နှစ်ခု Ethernet connectors, GPIO, အသံ I / O တစ်ခု option ကို slot ကတစ်ဖြုတ် gooseneck မိုက်ကရိုဖုန်း, SD ပါဝင်သည် ကဒ် slot ပါနှင့် HDMI output ကို။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-Smartpanel-Front.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: RSP-2318 Smartpanel
- MediorNet နှင့် MediorNet Compact
- အနုပညာရှင်, performance, and Acrobat ခွားစနစ်များ
- RockNet အသံစနစ်များ
"ကျနော်တို့ကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်ပညာရှင်များဆက်သွယ်ရေးနှင့် signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်အသစ်ကဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့နယူးယောက်မြို့မှပြန်လာနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်သစ်ကို Smartpanel ကနေအသစ်ကတန်ဂိုပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုသို့ Skype ကိုအကြောင်းအရာယူလာဘို့ငါတို့ STX-200 interface ကိုကျနော်တို့ထုတ်လွှင့်အသစ်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာ Workflows enable လုပ်ဖို့ကွန်ရက်အခြေခံအဆောက်အအုံများအသုံးချနိုင်ပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ "
- ခရစ္စတိုဖာလမ်း, GM က, မြောက်အမေရိကနှင့်ဗဟိုအမေရိက, Riedel ဆက်သွယ်ရေး
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/549773?trk=tyah
Riedel ဆက်သွယ်ရေး ဒီဇိုင်းများ, ထုတ်လုပ်နှင့်ထုတ်လွှင့်, လိုလားသူအသံ, အဖြစ်အပျက်, အားကစား, ပြဇာတ်ရုံ, လုံခြုံရေး application များအတွက်ရှေ့ဆောင် Real-time ဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များဖြန့်ဝေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းဖြစ်ရပ်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ, ဖိုင်ဘာ Backbones ရဲ့နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အရွယ်အစားဖြစ်ရပ်များအတွက်အလွယ်တကူစကေးကြောင်းကြိုးမဲ့ signal ကိုထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုရေဒီယိုနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များများအတွက်ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ 1987 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီယခုဥရောပ, အာရှ, သြစတြေးလျနှင့်အမေရိကအတွက် 350 နေရာများမှာ 12 ကလူထက်ပိုပြီးလုပ်ကိုင်။
အသံလွှင်း CCW ကုန်စည်ပြပွဲ 2014 အကြောင်းအရာ Riedel ဆက်သွယ်ရေး	2014-10-22
ယခင်: Wohler အမည်များ Key ကို Code ကိုမီဒီယာ Tachyon Wormhole Retiming ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အမေရိကန်ဖြူး
နောက်တစ်ခု: လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံများအတွက်မာစတာဖြန့်ဖြူးအဖြစ် MultiDyne ရက်ချိန်း Inviso